Iyo Mashiripiti Khibhodi yePad Pro Pro Zvino Inowanikwa Muchena | IPhone nhau
Nekuratidzwa kweiyo nyowani iPad Pro renji, vakomana vanobva kuCupertino vatora mukana wekuwedzera huwandu hwemakhibhodi emuchina weichi chishandiso: Mashiripiti Khibhodi. Ichi chinodhura chinongedzo chakarova pamusika mutema, ikozvino futi inowanikwa chena nemutengo mumwe chete.
Ruvara ndirwo chete shanduko iyi keyboard yakagashira kubvira payakasvika pamusika pakutanga kwegore rapfuura, saka kana iro dema dema risingangoshanda uye wanga wakamirira Apple kuti ikurudzirwe wedzera yakajairika chena ruvara kune ako keyboards, kana mutengo wayo ukasakukandira kumashure, ino ndiyo nguva yacho.
Mutengo weMicrosoft Keyboard muchena yakafanana, 339 euros yeiyo 11-inch iPad Pro (keyboard iyo inoenderanawo nechizvarwa chechina iPad Air) uye 4 euros yeiyo 399-inch iPad Pro. Iyo keyboard dhizaini iri mumitauro 12,9, kusanganisira Spanish.
Chii chinotipa iyo Yemagetsi Khibhodi yePad Pro?
Backlit keyboard ne1mm yekufamba scissor mashini.
Yakagadzirirwa Multi-Kubata maekisesaizi kuburikidza neyekubata padhi
Screen yekuona kona kugadzirisa.
USB - C chiteshi kubhadharisa iyo iPad Pro uye iPad Mhepo, iyo inotibvumidza isu kushandisa chishandiso chiteshi kune zvimwe zvishongedzo.
Kana yangopetwa, inova kesi inodzivirira iyo Pro Pro uye iPad Mhepo kubva kumativi ese.
Iyi keyboard inoenderana ne 12,9-inch iPad Pro yechina, yechina uye yechishanu chizvarwaine 1st, 2nd uye 3 chizvarwa 11-inch iPad Pro uye yechina chizvarwa iPad Mhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyo YeMagetsi Khibhodi yeiyo iPad Pro ikozvino yave kuwanikwa chena
4 Apple TV 2017K inogadzira nzira yemhando nyowani uye Apple TV HD inombundira nyowani Siri Remote